I-43 YEXABISO LOKUHAMBA KWIINDLU ZECLOSET KUNYE NEMIYILO YOMQUQUZELELI (IMIFANEKISO) - UYILO LWEGUMBI LOKULALA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokulala I-43 yeXabiso lokuHamba kwiiNdlu zeCloset kunye neMiyilo yoMququzeleli (Imifanekiso)
Wamkelekile kwigalari yethu yohambo oluphezulu lokunethezeka kwiingcamango zekhabethe. Indawo yokuhamba eyenzelwe kakuhle inokuba yindlela entle yokugcina iimpahla zakho, izihlangu kunye nezixhobo. Apha ngezantsi uyakufumana iikhabhathi ezintle ezinezinto ezifanelekileyo ezinjengeekhabhathi ezinkulu zokugcina kunye nokukhanya okuhle kunye nezinye izinto ezililize zokuzonwabisa ozithandayo.
Ikhabethe yokuhamba eboniswe kumfanekiso ongentla yandisa onke amacala eendonga ezikhoyo zokugcina. Iikhabhathi ezimile u-U zakhiwe ngomthi kunye nokugqitywa kwe-wengue emnyama ngeenkcukacha ezilula zokubumba, kodwa endaweni yomnyango wokhuni oluqinileyo, iingcango zenziwe ngokhuni iglasi ecacileyo ukuze ukwazi ukubona ngokulula okungaphakathi ekhabhathini. Ishelfu eyahlukileyo evaliweyo inikezelwe kwiingxowa, kwaye embindini sisiqithi seentlobo, kunye needrowa ezongezelelweyo zamabhanti, ubucwebe kunye nezinye izinto.
Yiya kuyilo lweCloset
Nazi ezinye zezinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe ngokuhamba kuyilo lwekhabethe:
Iikhabhathi zokugcina -Ukugcina iihempe zakho, ijezi, iipaji kunye nezinye izinto kubalulekile ukugcina ixesha kunye namandla ukukunceda ufumane oko ukufunayo ngokulula. Iglasi encinci ejongene nekhabhathi yase China nayo inokusebenza kakhulu ekugcineni izihlangu ukuze uzifumane ngokulula. Fumana ngakumbi iingcamango zokugcina izihlangu ekhabethe Apha.
udade wesipho somtshakazi
Iidrowa -Abantu abaninzi xa beyila ezabo iikhabhathi zesiko bakhetha ukubona iidrowa zabo zijonge emnyango ukuze zilungele.
Ukulayita -Ukukhanyisa kuya kunceda ukugcina ikhabethe lakho liqaqambile, livuya kwaye likuncede ufumane ngokukhawuleza into oyikhangelayo ngezo ntsuku zixakekileyo. Ngumbono olungileyo ukukhetha izibane zefluorescent endaweni ye-incandescent ukunciphisa ubushushu obongezelelekileyo obunikwa ziibhalbhu.
IWindows -Ukuba unayo iwindow ekuhambeni kwakho unokuxhamla ekukhanyeni kwendalo. Khawukhumbule nje ukuba ukukhanya kwelanga kunokuzihlambulula iimpahla zakho. Ukuthintela oku ungafuna ukuqaphela ukungaboni okanye ukugquma iifestile.
Ukuthintela -Ukubandakanya isithintelo egumbini lakho kulula kwaye kugcina izinto zicocekile.
Iipili -Ukuhlanganiswa kwezibuko ekuhambeni kwakho kunokuba sisisindisi sexesha lokwenyani. Izibuko zingenza ukuba ikhabethe lakho libonakale likhulu kwaye kuncede ukubonelela ngokukhanya.
Iipeninsula kunye neeIqithi -Ukuba uneziqithi zegumbi kunokuba sisongezo esihle njengoko zikunika igumbi lamagumbi ongezelelweyo okugcina kunye noncedo xa ubeka impahla. Xa ujonga isiqithi se-closet qiniseka ukuba une-36 ″? ujikeleze isiqithi macala onke ukuze ubenendawo eninzi yokuqhuba
Iibhentshi okanye izitulo -Iibhentshi zingakunika indawo elula yokuhlala kwaye uzame izihlangu. Izitulo zilungile xa ufuna uncedo olongezelelekileyo lokufikelela kwezo zinto phezulu phezulu kwishelufa ephezulu.
Abathengi -Ndikushiye okokugqibela kuba akusebenzi nje kuphela, kodwa kuyonwabisa. Ukongeza i-chandelier yindlela elungileyo yokongeza ubuqaqawuli bakho kunye nesitayile kwindawo yakho ye-closet.
Ukujonga umbono wakho wezimvo ungasebenzisa i- isoftware yoyilo Inkqubo. Oku kuyakuvumela ukuba ungenise amagumbi akho ubukhulu kunye nolwakhiwo, emva koko udibanise ii-racks ezahlukeneyo, iihanger kunye nezixhobo ukuze ubone ukuba indawo yakho ijongeka kanjani.
Ukuhamba ngeHolide kwiiNdawo zokuVala
Le khabhathi inkulu imema ukuhamba-ngaphakathi yenza ingxelo yokwenyani ngesiqithi sayo esihleliyo sigqityiwe nge-plush upholstery. I-chandelier yangoku kunye nezibane ezininzi ezigqityiweyo zibonelela ngokukhanya okuninzi kwaye zigcina izinto ziqaqambile ngelixa iikhabhathi zokunxiba ukhilimu ezinamaqhina e-satin etsala imvakalelo yesiko. Amampunge awakhelwe ngaphakathi aneendawo zokuhlala ezongezelelekileyo yindawo entle yokusebenzisa izithambiso okanye ubucwebe.
Olu hambo luhle kwikhabethe lubekwe kwigumbi lokuhlambela eliyintloko. Uluhlu lubonisa isiqithi esikhulu se-closet kunye nebhentshi ekuncedeni ngokutshintsha nokubeka izihlangu. Esi siqithi sinesifuba seedrowa zokugcina izinto zokunxiba kunye nenqwelwana emile kakuhle yemarble. I-chandelier inika eli gumbi ubuhle bendabuko obugqityiweyo obuphuculweyo ngubo yeglasi kunye neplanga elomeleleyo.
Ngokuchasene noyilo lwangaphambili lokuhamba-ngaphakathi lwekhabhathi, le isebenzisa uhlobo oluvulekileyo lwekhabethe ngaphandle kweminyango yekhabhinethi. Imephu eyenziwe ngomthi elaminethiweyo inezinto eziphezulu zekhabethe yehardware, kubandakanya intonga yokutsala ezantsi yokufikelela ngokulula kunye nepaki yeebhulukhwe onokuyikhupha njengedrowa. Uyilo oluvulekileyo luvumela ukufikelela ngokulula kunye nokukhulula isithuba esinokuthi sithathwe ngumnyango wekhabhathi. Idibanise ukukhanya kwe-LED kuyilo lwayo ukuze ukwazi ukujonga ngokulula iimpahla.
iingcinga zepryry iingcango
Olu hambo lokunethezeka kwikhabethe lubonisa ikhandlela elihle elinophahla lwetreyi yokuhombisa kunye nefestile enkulu yearched. Amakhethini e-sheer avumela ukukhanya kwendalo ngelixa amalengalenga amakhulu efumaneka ukugcina igumbi labucala. Ngamagumbi amaninzi okuxhoma iimpahla kunye neebhokisi ezimbalwa zeedrowa le khabhathi inkulu inika indawo eninzi. Isitulo sothando seVictorian, imigangatho yendalo yemithi kunye nokubumba okuhombisayo zizinto ezongezelelekileyo zokuhambisa umbono wobuhle.
Eli phupha lihamba ekhabhathini ligcwele yonke into onokuyifuna. Inendawo yokubeka izihlangu enendawo yokugcina eninzi, iingcango zeglasi ezijongene neglasi kunye nokuvulwa kwesitayile se-cubby ukuze yonke into ibonakale lula kwaye ifikeleleke kuyo.
Kukho isiqithi setafile se-quartz esimhlophe esinengubo eyakhiweyo yeedrowa kunye nendawo yokuhlala / yokwenza izithambiso. Ekupheleni kwegumbi kuboniswe iminyango yokunceda ekuzameni iimpahla. Okokugqibela igumbi likhanyisiwe ngokuhonjiswa ngamatye amancinci amancinanana amane kunye nelinye elikhulu elijingayo.
Uyilo lwamva nje lwekhabethe kunye noyilo olunomtsalane kunye nobukhulu. Ngenxa yobubanzi bayo, iyakwazi ukwahlula iimpahla zibe ngamacandelo amaninzi, kubandakanya neshelufu enkulu yezihlangu.
Nangona ikhabethe likwimo evulekileyo engenazicango, izinto ezisenyongweni ngakumbi zingagcinwa kwenye yeedrowa ezininzi. Kwakhona, ngenxa yesikim esimhlophe esimhlophe, ayisiyiyo kuphela indawo eqaqambileyo, ikwanceda umbala kunye nezinto ezibonakalayo zeempahla, ukwenza kube lula ukujonga ikhabethe lakho,
Lo ngumzekelo wegunjana elincinci lokuhamba elidibanisa iiyunithi zekhabethe zemodyuli. Ukuqulunqwa konke kucocekile kwi-wengue. ngokudityaniswa komthi kunye neglasi enesitampu iishelufa ezihlengahlengiswayo. Uyilo luhlobo oluvulekileyo olungena iingcango zekhabethe . Kwaye ineedrowa ezinobuso beedraw ze-acrylic ezikuvumela ukuba ubone ngokulula izinto ezigcinwe ngaphakathi.
Le khabethe inkulu yokuhamba inezinto ezinomtsalane kakhulu ezinje ngomgangatho kwisithuba seewardrobe, umgangatho wokhuni, ikhandlela yeglasi kunye nesipili esikroliweyo se-oval esineedrowa. Isilingi inephatheni enomdla engwevu emhlophe emhlophe eyahlula kakuhle kwikhabhathi emhlophe egumbini.
Olu seto lwe-closet yothando alunako ukwandisa indawo ekhoyo, kodwa indibaniselwano yamacandelo okugcina ashukumayo kunye neendonga ezixhonywe eludongeni inika inkangeleko yokunxiba boutique. Isibuko esikhulu somgangatho we-antique yindawo entle yokuthintela isithuba, kunye nekristale encinci yekristale.
Le yenye yeemodyuli zokuhamba-ngaphakathi ezisebenzisa i-laminates zepine kunye neeshelfu ezahlukeneyo kunye neerowuli zokujongana nezitayile zekhabethe. Ezinye zezinto ezibonakalayo zeli khabethe lilula yidrowa yetayi enamacandelo ahlukeneyo kwityayi nganye. Kwakhona iidrowa ezidibanisa iinkuni kunye neglasi ebusweni bayo ukuze zichonge ngokulula imixholo. Kwaye izisombululo zokugcina ezongezelelekileyo zixhonywe kwiintonga ezinjengeishelufu ezijingayo zezihlangu kunye neebhokisi zeefayile,
Olu hambo luncinci luvaliweyo lusebenzisa iikhabhathi zemodyuli ezinobukrelekrele kakhulu besilisa. Isebenzisa ii-laminates ezimnyama zomthi ezidityaniswe nomhlophe ocacileyo, zenza umahluko omnandi. Inezishelufu ezinokuhlengahlengiswa kunye nokulinganisela okuhle kweshelufu kunye neentonga zokuxhoma.
Ikwanekholamu enye yeedreyini ze-acrylic ngakumbi ezifanelekileyo zokugcina izipaji, iingxowa ezincinci kunye neebhegi kunye nezinye izinto. Izinto zokubona zenza kube lula ukufumana izinto ezithile ngaphandle kokujonga yonke idrowa. Le khabhathi yokuhamba-hamba idibanisa isiqwenga seemodyuli seekhabhathi ezivulekileyo kunye neeshelfu ezinamaqhekeza okuhambisa anokuhanjiswa okuhonjisiweyo kunye nokwakha iinkuni eziqinileyo. Ngaphandle kokwahlukahluka, zonke ziyahambelana ngombala weorenji-Mahogany color.
Isiqwenga esikhulu seemodyuli sinikezela indawo esembindini yeeshelfu ezivulekileyo, ngelixa amacala amabini eyeentonga zokuxhoma. Iyunithi yonke ineshelufu esezantsi yenqanaba lesi-2 esetyenziselwa ukugcina izihlangu kunye neebhegi ezincinci. Le khabhathi yokuhamba inesibheno esiqhelekileyo kunye nokusetyenziswa kwayo kokugqibela kwe-mahogany kwiikhabhathi zayo. Endaweni yeebhodi ezilaminethiweyo, isebenzisa iplywood eyenziwe ngeribhoni enamabala agqityiweyo mahogany ukunika imbonakalo yomthi oqinileyo. Ikwanazo neenkcukacha zokubumba ezilula emaphethelweni nakubuso bedraw. Ngenxa yokugqitywa komthi omnyama, ikhabethe linokubonakala limnyama kakhulu ukuze kukhanyiswe ukukhanya kwekhabhathi ukunceda ukukhanyisa iimpahla.
Esi sithuba sekhabhathi yanamhlanje sikhulu ngokwaneleyo kwaye sikhanyiswe kakuhle ngenxa yeefestile zaso. Endaweni yeekhabhathi zemveli ezenziwe ngomthi okanye iiplyboard, le walk-in-closet isebenzisa iinkuni ezincinci kuyilo lwayo.
Isebenzisa isinyithi esincanyathiselwe emgangathweni nasesilingini ukubamba iidrowa, iishelfu kunye neentonga zokuxhoma. Ezi zinokuhlengahlengiswa ukuze ukwazi ukuzilungisa ngokulula iikhabhathi zakho ngokweemfuno zakho. Ukungabikho kwamacala omthi kunye nokuxhaswa kukwenza ukuba ikhabhathi ibonakale ilula kwaye ikhanya ngakumbi.
Ngokungafaniyo nemizekelo yangaphambili, olu hambo lokusondela lusetyenziswa kakuhle kwaye luzaliswe ziimpahla kunye nezinye izinto. Iikhabhathi zilula kwaye zimodare kunye ne-mahogany laminates. Ineendidi ezintle zesithuba sokuxhoma iimpahla kunye neeshelfu, kunye neshelfu enkulu enokuhlengahlengiswa yezihlangu. Inezishelufa ezineengcango ze-acrylic zokugcina izinto ngaphakathi zingavezwa kunye nesiqithi sokugcina isikwere embindini wezinto ezinjengeekawusi kunye nempahla yangaphantsi. Hamba kwimibono yekhabethe yezithuba ezincinci kufuneka zipakishe kakhulu kuyilo lwazo. Ngenxa yesithuba esincinci, olu luyilo lusebenzisa umthi okhanyayo womthi ukunceda ukuba ubonakale umkhulu kwaye ukhanya ngakumbi. Isebenzisa ukugqitywa kwemithi yeMaphu kwaye ikhethe ukusebenzisa uhlobo lweekhabhathi ezivulekileyo.
Iindonga ezimbini ezifanayo zanikezelwa ngokuxhoma iimpahla, ngelixa udonga oluphakathi kulapho zonke iidrowa kunye neeshelfu, ezenza ukuba zifikeleleke ngokulula kwaye zibonelele ngendawo eninzi yezinto zokunxiba. Ngaphandle kobukho befestile, oku kuhamba-kwigumbi lokugcina kubonakala kukhanya kwaye kukhanya ngenxa yokusetyenziswa kwabamhlophe. Inemigangatho emhlophe emhlophe kunye nekhabhathi emhlophe eneenkcukacha zegolide. Indibaniselwano emhlophe kunye negolide yekhabhathi yenze imbonakalo entle nenobunewunewu, ikwasebenzisa idrowa yegolide. Inokulinganisela okuhle kweentonga zokuxhoma, iidrowa kunye neeshelfu, kwaye inenxalenye enkulu enikezelwe kwisipili somzimba.
Ukuhamba-kwi-closet enesibheno se-rustic kakhulu kunye nokusetyenziswa kwekhabinethi yamantongomane. Ubukho beefestile ezimbini kwigunjana lutya indawo eninzi yodonga enokuthi ibekelwe iikhabhathi ezigcweleyo, kodwa iyayenza y yongeza isiqithi esixande kunye nabadwebi kunye neeshelfu zokugcina. Isithuba sinebhentshi elakhelwe ngaphakathi kunye neekhabhathi ezingaphantsi kwefestile ezinendawo yokugcina ezantsi.
Ukuba noyilo olwahlukileyo, oku kuhamba-kwigumbi lokugcina kukhulisa zonke iindonga zasimahla zezithuba kwaye uzisebenzise njengokugcina / iikhabhathi. Sinokubona kuphela icala elinye lekhabethe ngenxa yesithuba esilinganiselweyo, kodwa uya kuba nakho ukubona iikhabhathi ezivulwe iti ezineentlobo ezahlukeneyo zamashalofu, iishelufa zezihlangu, iidrowa kunye nabaququzeleli bebhande / bebhanti. Kukwakho nesinxibo / isithebe setafile ekupheleni kwekhabethe elakhelwe ngaphakathi kunye neekhabhathi eziphambili.
Olu luyilo lwekhabethe olulula olusebenzisa izinto ezinemibala ekhanyayo ukwenza indawo eqaqambileyo ehlaziyayo. Isebenzisa iibhodi ze-MDF ezikhaphukhaphu ezilungisiweyo kwiikhabhathi zayo zemodyuli ezifakwe ngesixhobo se-hi-tech njengesixhobo sokurhola esisezantsi sokufikelela ngokulula. Ngaphandle kweekhabhathi ezivulekileyo, ikwanekhawuntari yesiqithi ende kunye nomphezulu wegranite omnyama kunye nendawo eninzi yedrowa yokugcina eyongezelelweyo.
Omnye umzekelo we-walk-in-closet esebenzisa isakhelo sesinyithi esilungelelanisiweyo ngokuxhasa ukubiyela ngomthi. Oku kukhokelela kwikhabethe ekhanyayo, ekhanyayo kunye nebanzi ngakumbi. Ipeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka iyabonakala ngenxa yokuseta kwekhabhinethi, kwaye iququzelele ekwenzeni indawo ijonge ngakumbi.
Umbala wepeyinti we-oatmeal kunye ne-carpet flooring esetyenziswe kweli gumbi yenza ukuba ukuhamba-kwi-closet kubonakale kukhulu kwaye kukhanya. Ngumbala ofudumeleyo ongenzima kakhulu kwaye onokulinganisa ngokulula nayiphi na into ekugqitywe yikhabhinethi oceba ukuyisebenzisa. Kulo mzekelo, iikhabhathi ezivulekileyo zimhlophe kwaye azikho ukuxhaswa kweenkuni, zityhila iindonga ezinemibala ye-oatmeal. Iikhabhathi ziimodyuli kwaye zineeshelfu ezinokuhlengahlengiswa kunye neentonga zokuxhoma.
Le ndlela yokuhamba-in-closet ineyantlukwano entle yemibala emnyama kunye nokukhanya, ngombala omnyama ongwevu kunye nokukhanya kweemapile zokukhanya kwiikhabhathi zayo zemodyuli. Inendawo enkulu yentsimbi embindini wegumbi kunye nokujula okungwevu okumnyama kunye nemilo. Iikhabhathi luhlobo oluvulekileyo olunamadrowa amakhulu kunye namashalofu avulekileyo. Iishelufa azilungelelaniswa, kodwa iikhabhathi zifakelwe izixhobo zentsimbi ezinokuhlengahlengiswa njengentonga yokujingisa ezantsi.
Imizekelo yangaphambili ibonakalise iimodyuli zekhabinethi ngaphandle kweeplanga kunye nokuxhasa, kwaye zixhaswe yintsimbi ebhinqileyo ebambelele emgangathweni nasesilingini. Kulo mzekelo, iikhabhathi azinazo ii-sidings, zikunika isiphumo esivulekileyo, kodwa zisebenzisa i-laminated teak backing ngenkangeleko entle. Iishelufa ezivulekileyo kunye needrowa ziqhotyoshelwe eludongeni izixhasi ezifihliweyo phakathi kweebhodi ezixhaswayo elaminethiweyo, kwaye zonke ziyahlengahlengiswa. Kuba ayinazo izithambisi zomthi, iintonga zokuxhoma ziqhotyoshelwe phantsi kweeshelfu endaweni yoko.
Le yokuhamba-in-closet yokwahlulahlula kwigumbi lokuhlambela nakwigumbi lokulala kuphela ngokwahlulahlula iglasi enqabileyo. Ukuze ungathinteli ukwahlula iglasi, iikhabhathi ezisetyenzisiweyo zixhaswa ziintsimbi ezinyityilikisiweyo eziqhotyoshelwe eluphahleni nasemgangathweni. Zonke zivulekile kwaye zinokuhlengahlengiswa ukuze ukwazi ukuzenza ngokwezifiso ngokweemfuno zakho. I-laminate emhlophe kunye nesinyithi zikwahambelana nezahlulo zeglasi ezinamacala amhlophe, ezenza ukuba indawo ibonakale imanyene.
Kuyafana nakwimizekelo yangaphambili, ezi khabhathi zemodyuli azikho kuxhaswa, ukunceda ukwenza indawo encinci ibonakale inkulu. Iikhabhathi nazo azinasiseko, kwaye zonke ziqhotyoshelwe / zixhaswe ziindonga. Iishelufa zonke zinokuhlengahlengiswa kwaye ke kunjalo nangeentonga zokuxhoma ukuze kube lula ukulungelelanisa ukuseta ikhabethe ngokweemfuno zakho eziguqukayo.
Ngokufana nalo mzekelo ungasentla, iikhabhathi ezisetyenzisiweyo kule ndawo yokuhamba-nayo ayinankxaso, kodwa ezinye iishelufa zinenkxaso yesiseko. Isebenzisa umbala omnyama we-laminate yesibheno esitsha kunye nokukhanya. Iishelufa ezivulekileyo zixhonywe ngepini, kwaye nangona zinokuhlengahlengiswa, unikwe umda ziindawo ezikhoyo zenkxaso ezinyusiweyo. Kukwakho nefestile encinci ekupheleni kwekhabethe kwaye ngaphantsi kukho isifuba sedrowa yokugcina eyongezelelweyo. Oku igumbu lokulala elikhulu ukuhamba-kwi-closet isebenzisa ithoni yomhlaba omninzi wekhonkco kwiikhabhathi zayo ezivulekileyo. Isicwangciso somgangatho esikhethekileyo segumbi lekhabethe sikwakhokelela ekusetyenzisweni kwekhabhinethi ngokukodwa. Iikhabhathi zonke ziphantsi komgangatho, zinezishelu ezinokuhlengahlengiswa kunye neentonga zokuxhoma ngaphandle kokuxhaswa ngamaplanga. Kwakhona ineentlobo ezahlukeneyo zeedrowa kunye neeshelfu ezinobungakanani obahlukeneyo beemfuno zokugcina ezahlukeneyo. Iikhabhathi zolu hambo-lokuhamba zisebenzisa indibaniselwano eyahlukileyo yeethoni zomthi kwiilaminathi zayo. Iishelufa kunye neerowa zine-laminate ye-pine efanayo nomgangatho osetyenziswa kwikhabhathi, ngelixa oyilo oluphambili, amacala kunye nokuxhaswa konke kulaminishwe ngombala omnyama we-mahogany. Umahluko weetoni zomthi uzisa umdla omkhulu kwiikhabhathi. Ineentlobo-ntlobo zeedrowa, ii-tie / amabhanti okuququzelela ibhanti kunye neeshelfu ezivaliweyo. Iirandi zokuxhoma ziqhotyoshelwe phantsi kweeshelfu.
Ipeyinti emnyama emfusa yeli gunjana izisa ukujonga okuhlaziyayo okwahlukileyo, okunomdla kodwa okunganyanzelisiyo. Iikhabhathi ziluhlobo oluvulekileyo kwaye lwenziwe ngesinyithi, kodwa alincanyathiswanga phantsi okanye ezindongeni kodwa ziyahanjiswa. Iishelufa ziyahlengahlengiswa, kodwa iintonga zokuxhoma ziyalungiswa. Ikwanazo needrowa ezinokususwa ezimhlophe ezahlukileyo kwiikhabhathi ezivulekileyo ezenziwe ngentsimbi ukuze ukwazi ukuzibeka naphi na apho ufuna khona.
Ukuhamba-ngaphakathi kwigumbi lokuhlala elinendawo ethambileyo yeetoni iikhabhathi ezilaminethiweyo. Iikhabhathi zisemgangathweni ukuya eluphahleni, zishelufa ezinokuhlengahlengiswa kunye needrowa ezincinci. Kwakhona kufakwe iintonga zokuxhoma-phantsi zokufikelela ngokulula. Ngelixa iikhabhathi ziluhlobo oluvulekileyo, kukho ishelufu enkulu ngasemva egumbini kunye neengcango, zilungele ukugcinwa kweebhegi okanye izihlangu.
Esi sisithuba esikhulu sekhabhathi enefestile enkulu yesoftware, izisa ukukhanya kwisithuba. Iikhabhathi zilula kwaye ziluhlobo oluvulekileyo ngaphandle komgangatho omkhulu wekhabethe, kwaye zilaminishwe ngombala omhlophe. Isiphelo esinye seekhabhathi sinikezelwe kwiishelufa, kwaye kuphela yinxalenye yeedrowa. Kukho indawo eninzi yokuxhoma intonga, kodwa ayinakulungelelaniswa kwaye iqhotyoshelwe ngaphantsi kweeshelfu.
Njengomzekelo wangaphambili, le khabhathi inkulu, kodwa le ayinabo ubunewunewu befestile yokunceda ukukhanyisa ngokwendalo indawo yekhabhathi. Nangona kunjalo, ikhabethe lisabonakala liqaqambile ngenxa yokukhanya okwaneleyo okwenziweyo kunye nekhabhathi emhlophe emhlophe. Ikhaphethi ye-lilac ikwanceda ukuthambisa inkangeleko yendawo kwaye yongeze umbala wombala kwisithuba.
Umama ka-mgny womtshakazi unxiba
Igunjana elikhulu lokungena elinefestile ephezulu nebanzi enceda ukukhanyisa indawo. Indawo ephezulu yefestile ivumela ukukhanya kungene kwigunjana, kwaye kwangaxeshanye, kugcinwe isixa esifanelekileyo sobumfihlo kunye nokuvumela indawo yokongeza ukugcinwa okungaphezulu. Kule meko, indawo ephantsi kwefestile yabelwa isifuba esinyuswe ngodonga. Ikhabhinethi evulekileyo ekupheleni kwegumbi yeyokuxhoma iimpahla, ngelixa icala eliphambi kwefestile lidibanisa iishelufu ezivulekileyo ezivulekileyo kunye neetowuli ezinzulu.
Esi sithuba sekhabhathi sinephalethi epholileyo ikakhulu ebhalwe kumthunzi ongwevu osetyenziselwa iindonga zawo. Iikhabhathi zemodyuli ezisetyenzisiweyo azikho kuxhaswa ngumthi ke ngoko ziveza ipeyinti engwevu yeendonga, kwaye ii laminates ezimhlophe zikwanceda ukugxininisa kwiindonga ezingwevu. Iikhabhathi zivulekile, zinentlobo ezintle zeeshelfu ezinokuhlengahlengiswa, iintonga zokuxhoma kunye needrowa ezizinzileyo.
Le yenye ikhabethe enkulu yanamhlanje eneemodyuli ezivuliweyo zemodyuli. Uya kuqaphela ukuba uninzi lwendawo lubekelwe ukuxhoma iimpahla kwaye linye kuphela icandelo elincinci lelokuloba kunye neeshelfu ezivulekileyo. Izinti zokuxhoma kunye neesahluli ezixwesileyo ziyahlengahlengiswa, ke ukuba ufuna indawo yeengubo zakho ezinde, ungasusa isahluli esithe tyaba nakwizinti ezisezantsi zokuzigcina. Ukugqitywa kweekhabhathi kwahlukile. Ubuso beebhodi bumbethe ngombala omhlophe, wile amacala / imiphetho inegrey PVC siding, yenza umahluko okhethekileyo.
Isithuba esincinci se-closet sisebenzisa umthunzi omenyezelayo wemephu yokugqiba iikhabhathi ezivulekileyo. Indawo yokuxhoma iimpahla yahlulwe kwiishelufa nakwiidrowa, ekuvumela ukuba wahlule ngokulula izinto. Ikwanazo needrowa ezincinci ezithandekayo ngobukhulu obahlukeneyo kunye neenkcukacha zokubumba kunye neklasikhi yobhedu yodidi.
Igunjana lokuhamba-ngaphakathi lale mihla elidibanisa imibala emibini elaminethiweyo: ngwevu nomhlophe. Izilayiti ezingwevu zisetyenziswa kulwakhiwo lwee khabhathi, ngelixa ii-laminates ezimhlophe zazisetyenziswa kubuso beedrowa nakwiishelufa. Iishelufa kunye needrowa, nangona kunjalo, zonke zilungisiwe, kunye nentonga yokuxhoma, kodwa kukho uluhlu olwaneleyo lweeshelfu kunye needrowa kwiimfuno zakho zokugcina.
Ngenxa yendawo encinci, le khabhathi isebenzise ikhabhinethi emhlophe eneeshelfu ezinokuhlengahlengiswa. Ikwasebenzisa iishelufa zeglasi ezinika ukukhanya ngakumbi kunye nemvakalelo evulekileyo, kunye needrowa zetsimbi. Uya kuqaphela ishelufu yezihlangu ethambekileyo eyenza ukufikelela kwezihlangu zakho kube lula.
Le khabhathi incinci isebenzisa ngempumelelo lonke udonga olukhoyo lweekhabhathi, kodwa iyakuthintela ukwenza ikona kwikhabhathi yokwandisa iindonga zobude bonke beentonga ezijingayo. Amacala ama-2 azinikele ikakhulu kwiintonga ezijingayo kunye neeshelfu, ngelixa esiphelweni zizonke iidrowa kunye neeshelfu ezingaphezulu. Iilaminates ezimhlophe zeekhabhathi zikwanceda ekwenzeni indawo ibonakale inkulu.
Xa usiza nincinci hamba kuyilo lwekhabethe kubalulekile ukuqaphela imibala yepeyinti ukunceda ukukhanyisa indawo kwaye uyinike inkangeleko yokuba inkulu. Kuba le khabhathi incinci, isebenzisa iikhabhathi ezimhlophe-ngepeyinti ezingenazingcango zokunceda ikhabhathi ibonakale inkulu.
Uyilo lwekhabhinethi lwahlula indawo yokuxhoma iimpahla kunye necandelo leeshelfu ezivulekileyo kunye needrowa. Iishelufa ezivulekileyo ziyahlengahlengiswa kodwa zikhawulelwe kwiindawo eziphakamileyo ezikhethiweyo zokuphina, kwaye iidrowa azifakwanga ngokupheleleyo ukuze ujonge imixholo yayo ngokuvula / ukubamba kwayo okuphezulu.
[yandisa isihloko = bonisa oovimba bolwazi swaptitle = Fihla oovimba bolwazi] (1) jingdianjiajuju ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons) (2) jingdianjiajuju ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons) (3) jingdianjiajuju ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons) (4) jingdianjiajuju ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons) [/ yandisa]
Izitepsi ngaphakathi ngaphakathi
tshintsha igama kwilayisensi yokuqhuba pa
izihlangu zomtshato wasebukhosini isithende esisezantsi
ingaba nizakuba zizipho zam zontombi